နိုင်ဝင်းသီ ● ည​မွှေးပန်းဗျစ်​ဆိုင်​ – MoeMaKa Burmese News & Media
April 9, 2017 April 9, 2017 Aung Htet
“စာ​ရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာဆိုတာ မီး​လောင်​နေတဲ့ ကြယ်​​တွေပါကွာ။​ လောင်​​နေတုန်း​တော့ မီး​တောက်​​တွေနဲ့ လှပ​နေသ လိုပါပဲ။ ​လောင်​ကျွမ်းပြီးစီးတဲ့အခါမှာ​တော့..”
“သူ ဆိုင်​ကို အ​စောကြီးလာတာကိုဘုရားသခင်​ကလည်း ကြိုက်​မှာမဟုတ်​ပါဘူးကွာ။ ဒါ​ပေမယ့်​ ဒီ​ကောင်​ ဆိုင်​ကို အ​စော ကြီး​​ရောက်​လာခဲ့တယ်​။ ဘာဖြစ်​လာတာလည်း​မေး​တော့လည်း မ​ပြောဘူးကွ။ သူ့ပုံစံကိုကြည့်​ရတာဟာ ဘုရားသခင်​​မေး မြန်းရင်​​တောင်​ ပြန်​​ဖြေမယ့်​ လက္ခဏာမျိုး မရှိဘူးကွ”
သူတို့ ဘယ်​​​တွေရောက်​ကုန်​ပြီလဲလို့ကို​ယောဟန်​ကို​မေး​ကြည့်​တော့ …
​”သူတို့ ဘယ်​​နေရာ​တွေ ​ရောက်​ကုန်​လဲဆိုတာ ဘုရားသခင်​​တောင်​သိပါ့မလား မသိပါဘူးကွာ။ နှစ်​​တွေက သိပ်​ကြာသွားခဲ့ပြီ​ မဟုတ်​လား”
“ရိုင်းမြစ်​ကမ်း​ဘေးက ဝိုင်​အရက်​မှ​ကောင်းတာ မဟုတ်​ပါဘူးကွာ။ ရထားသံလမ်း​ဘေး​က ထန်းလျက်​မီး​တောက်​ကလည်း ပျံ​နေ​​အောင်​ ​ကောင်းတာပါပဲကွာ”
“ဒီက​လေး​တွေ မအိပ်​​သေးဘူးလား။ ဘာဖြစ်​လို့ မအိပ်​​သေးတာလည်း” လို့ ကဗျာဆရာက ​မေး​တော့….
“အမြန်​ရထားတ​စီး လာဖို့ရှိ​သေးတယ်​​လေကွာ။ အဲဒီရထားလာရင်​ က​လေး​တွေအတွက်​ မုန့်​​တွေ၊ အချိုရည်​ဘူး​တွေ၊ ​ရေသန့် ဘူး​တွေ ပစ်​ချပေးသွားတတ်​တယ်​​လေ” လို့ ကို​ယောဟန်​ကပြန်​​ပြော​တော့ ကဗျာဆရာဟာ ဝမ်းနည်းပက်​လက်​နဲ့ ရှိုက်​ကြီး တငင်​ ငို​ကြွေး​နေခဲ့တာကို ကျွန်​​တော်​အမှတ်​ရ​နေ​သေးတယ်​။
“ရထားလမ်းကလည်း အမြဲတမ်းလိုလိုမည်းမှောင်​​နေ​တော့ ဘုရားသခင်​ကလည်း မမြင်​ဘူးနဲ့တူပါတယ်​ကွာ။ အကယ်​၍ မြင်​ခဲ့ရင်​​တော့ အဲဒီက​လေး​တွေနဲ့ပတ်​သက်​ပြီး ဘုရားသခင်​ဟာ တ​ခုခု​တော့ လုပ်​​ပေးမှာပါကွာ” တဲ့။
တ​ရက်​မှာ “ဒီ​လောက်​ ယင်​​ကောင်​​တွေများတဲ့ဆိုင်​ကို ဘုရားသခင်​က​တော့ ကြိုက်​နှစ်​သက်​မယ်​မထင်​ပါဘူးကွာ။ ဒီ​ကောင်​ ဘာကိုသ​ဘောကျတယ်​မ​ပြောတတ်​ပါဘူး” လို့​ပြော​တော့ ကဗျာဆရာဟာ တ​စုံတ​ခုကို သတိရဟန်​နဲ့ …
“နေပါဦး​ဗျ။ ခင်​ဗျားက ဘုရားသခင်​ကို ချစ်​ခင်​​လေးစားတဲ့လူဆို​တော့ ​မေးရဦးမယ်​။ ​ဂေါ့ (ဒ်​) က ​ကြွေအံကစားသလားဗျ၊ ကျွန်​​တော်​​တ​​နေရာရာမှာ ဖတ်​ဖူးတယ်​​ အောက်​​မေ့လို့”
“ဟာ …​တောက်​တီး​တောက်​တဲ့ကွာ။ ဒွန္နယာမှာ ​ဘုရားသခင်​​လောက်​ အလုပ်​များတာ ရှိနိုင်​ပါ့ဦးမလားကွာ။ အဲဒီလောက်​အလုပ်​များတဲ့ ဘုရားသခင်​ဟာ ဘယ့်​နှယ့်​လုပ်​ပြီး​ ကြွေအံကစားနိုင်​မှာလဲ ငါ့​ကောင်​ရာ” လို့​ပြောပြီး ​ခေါင်းတယမ်းယမ်းနဲ့ ထွက်​သွားတာကို ကျွန်​​တော်​အမှတ်​ရ​နေ​ပါသေးတယ်​။ ​ပျော်​ရွှင်​ခဲ့ရတဲ့ ​နေ့ရက်​​တွေပါပဲ။ ဘဝအ​ခြေအ​နေမ​ပေးလို့သာ စာ​ပေနဲ့ ကင်းကွာခဲ့ရပေမယ့်​ ကို​ယောဟန်​ဟာ အရင်​တုန်းကစာဖတ်​ခဲ့တဲ့ လူတ​​ယောက်​ပါ။ အဲဒီ စာ​ပေချစ်​စိတ်​အခံနဲ့ပဲ ကျွန်​​တော်​တို့အဖွဲ့ကို ညီရင်းအစ်​ကိုလို သူ ချစ်​ခင်​ခဲ့တာ​ပေါ့။ ကျွန်​​တော်​တို့အဖွဲ့ ဘယ်​​လောက်​ဆိုးဆိုး သူ အနွံတာခံခဲ့တာ​ပေါ့။
ဒီ​လောက်​ ဆန်းကြယ်​လှပတဲ့ ​လ​ရောင်​ကို တ​ကြိမ်​တ​ခါမှ ကျွန်​​တော်​မ​တွေ့ဖူး​သေးဘူး။ လ​ရောင်​ဟာ ​ဗေဒါရောင်​နဲ့ နူးညံ့စို လွင်​​နေတယ်​။ တိ်​မ်​​တွေကလည်း ဖြူ မည်းနီ ညို ဝါ ပြာ စိမ်း အ​သွေးစုံ….. အ​ရောင်​စုံ …
“ဒီလိုညမျိုးမှာ ​ဟောဒီ ရထားလမ်း​လေးထဲကို ထရိုဂျင်​မြင်းကြီး ဟီသံ​​ပေး​ဝင်​လာရင်​​တောင်​ အံ့သြစရာ​ မဟုတ်​ပါဘူးကွာ။ ညက တအားလှ​နေတာကိုး” လို့​ပြော​တော့ ကဗျာဆရာက မီး​တောက်​တ​လုံးကို ဆွဲထုတ်​လာတယ်​။
“ဒီလိုညမျိုးမှ ငါတို့မ​သောက်​ဘူးဆိုရင်​ ငါတို့ဟာရူး​နေလို့ပဲ ဖြစ်​ရမယ်​လို့​” ပြောပြီး ဆိုင်​အပြင်​ဘက်​ကို ထွက်​​ပြေးသွား​လေ ရဲ့။ ကျွန်​​တော်​တို့အားလုံးဟာ ခွက်တွေကိုယ်စီကိုင်ပြီး ညထဲကို ကသော​က​မျော ပြေးထွက်ခဲ့ရပြီပေါ့။
“ဘုရားသခင်​ ​ပေးသနား​တော်​မူတဲ့ ခွက်​ပါကွာ”
ဆိုင်​ထဲ​ ​ရောက်​တယ်​ဆိုရင်​ပဲ ကို​ယောဟန်​ဟာ သူ့မျက်​နှာ​ပေါ်က မိုး​ရေစက်​​တွေကို လက်​နဲ့ သပ်​ချလိုက်​ရင်း …..
“ဘုရားသခင်​က အမှတ်တရဖြစ်အောင်​လို့ ဖန်​တီး​ပေးထားတဲ့ညကွ။ ဆိုင်​ထဲဝင်​​နေလုိ့ ဘာအ​ကြောင်းထူးလာမှာလည်း ကွာ” လို့​ပြောပြီး ဆိုင်​အပြင်​ဘက်​ကို ​ပြေး​ထွက်​သွားပြန်​ပါတယ်​။ သူ ဆိုင်​အပြင်​ဘက်​ကို ​ပြေးထွက်​သွား​တော့ ကျွန်​​တော်​တုိ့ကလည်း သူ့​နောက်​ကို ​ပျော်​​ပျော်​ကြီး ​ပြေးလိုက်​ကြရပြန်​တယ်​။
“ဘုရားသခင်​က​တော့ ​ဆေးခန်းအထိလိုက်​ပို့​ပေးမှာ မဟုတ်​ဘူး​နော်​။ ​ဆေးခန်းကို​တော့ ကိုယ့်​အစီအစဉ်​နဲ့ကိုယ်​သွားကြ” တဲ့။
ရထားသံလမ်းတ​​လျှောက်​မှာ​နေထိုင်တဲ့လူ​တွေဟာ ဒီ့ပြင်သီချင်းကိုသာ မကြားဖူးရင်နေရမယ်။​ ကိုမြကြီးရဲ့ မိုးကိုတော့ အလွတ်တောင်ရနေပြီလားမဆိုနိုင်​ဘူး။ ဘယ်​အချိန်​ပဲဖြစ်​ဖြစ်​ သူဟာ မိုးသီချင်းကို ဆို​လေ့ရှိသူပါ။ မိုး​တွေရွာ​နေလို့၊ လျှပ်​​တွေ တဝင်းဝင်းလက်​​နေလို့ မိုးသီချင်းကို ဟဲချလိုက်​တာက ပြဿနာမဟုတ်​ဖူး​ပေါ့။ ခက်နေတာက နှင်း​တွေဝေနေအောင်ကျ​နေရင်လည်းမိုး၊ လန်​ပျံ​နေ​အောင်​ ပူလောင်အိုက်စပ်လွန်းလုိ့ ဝါးယပ်​​တောင်​​လေး တဖျပ်​ဖျပ်​ခတ်​​နေ​ရတဲ့ နွေညဆိုလည်း မိုး ပဲဆို​နေ​လေတော့ ခွမကျပေ​ဘူးလား။ မိုးသီချင်းထဲမှာ​တောင်​ လိုက်​​တော်​မူသင့်​ပါငဲ့…. အခွင့်​ကို​မျှော်​ဆိုတဲ့အပိုဒ်​ကို အစွဲ အလမ်း​ တော်​​တော်​ကြီးပုံရပါတယ်​။ အဲဒီအပိုဒ်​ကိုရောက်​ရင်​ ​ရှေ့ကို​ တော်​​တော်​နဲ့ကို မဆက်​နိုင်​​တော့ဘူး။ တ​​ကျော့ပြီးတ​​ကျော့၊ တ​​ကျော့ပြီးတ​​ကျော့ ထပ်​တလဲလဲကို ဆို​နေ​တော့တာပါပဲ။
အဲဒီရက်​​တွေတုန်းကပါပဲ။ ကျွန်​​တော်​တို့ဟာ အလုပ်​​တွေ`&ှုပ်​​ထွေးပြီး ည​မွှေးပန်းဗျစ်​ဆိုင်​​လေးကို သုံး​လေးရက်​​လောက်​ မ​ရောက်​ခဲ့​လေဘူး။ အဲဒီရက်တွေတုန်းကပါပဲ …..
`အဖြစ်´နောက်က `အပျက်´လိုက်လာတာကို သိနေပေမယ့် ကျွန်တ်ာတို့ဟာ ညမွှေးပန်းဗျစ်ဆိုင်လေးရဲ့ ဖြစ်တည်စုဖွဲ့မှုထဲ ကနေပြီး “သူမ” ကို အမြဲတစေ မေ့လျော့ထားခဲ့ကြတယ်။ အခုတော့ အဖြစ်တွေဟာ အပျက်အပျက်နဲ့ ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။
တ​လမ်းလုံးမှာ သူတို့လင်​မယားအ​ကြောင်းကို နာနာကျင်​ကျင်​နဲ့ ကျွန်​​တော်​​တွေးလာခဲ့တယ်​။ အိပ်​ယာထဲလဲ​နေတဲ့သူမကို အမျက်​အအီ အနည်းငယ်​မျှ​လောက်​​ပင်​ မရှိဘဲ ပြုစုယုယလာခဲ့တာ။ သူမရဲ့ အိပ်​ယာ​ဘေးမှာ သူမ ချစ်​မက်​တဲ့နှင်းဆီပွင့် တွေ အမြဲတ​စေ ထိုးစိုက်​ထားပေးခဲ့တာ။ သူမ ​ခေါ်လိုက်​​လေတိုင်း ဆိုင်​​လေးထဲကလူ​တွေကို ပြုံးပြပြီး သူမရှိရာ အထပ်​ခိုး​လေး​ပေါ်ကို ​ပြေးတက်​သွားတတ်​တာ။ ခါတ​ရံ ဆိုင်​​လေးထဲမှာ လူသိပ်​ပါး​နေရင်​ သူမ​ဘေးမှာ ဂစ်​တာတီးပြီး သီချင်းတိုးတိုး​လေး ဆိုညည်းပြ​လေ့ရှိတာ။ ဘုရားသခင်​ထံမှာ မကြာခဏဆိုသလို သူမအတွက်​ ဝတ်​ပြုဆု​တောင်း​ပေးတတ်​တာ။ တ​ခါ တ​ခါ သမ္မာကျမ်းစာကို သူမ​ဘေးမှာ တိုးတိ်​တ်​တဲ့အသံ​လေးနဲ့ ဖတ်​ပြ​နေတတ်​တာ။ ဘုရားသခင်​ထံမှာ ဝတ်​ပြုဆု​တောင်းပြီး​လေတိုင်း “အာမင်​” ဆိုတဲ့အသံ​လေးဟာ အထပ်​ခိုး​လေး​ပေါ်က​နေ စင်​ကြယ်​စွာနဲ့ လွင့်​ကျလာတတ်​တာ။
အဲဒီအချိန်​မှာပဲ ဝတ္တုတိုဆရာဟာ တ​ဝေါ​ဝေါရွာ​နေတဲ့ ​ကောင်းကင်​ကြီးကို ​မော့ကြည့်​လိုက်​ပြီး မိုးသီချင်းကို​ လွမ်းလွမ်း​ဆွေး​ဆွေးနဲ့ ဆိုချလိုက်​တယ်​။ ဝဿန်ခါမှီ…. လရာသီ ပြာရီရစ်​ဝိုင်း… ဆိုင်းတွဲ့တွဲ့.. မှိုင်း​တလဲ့လဲ့.. သိုင်းဖွဲ့လို့ဟန်​ချီ… မင်း လွင်​ဆီ ညို​ရောင်​​မှောင်​ခိုး….
အဲဒီအချိန်​မှာပဲ… … …… …… …. .။
← အောင်မော်ဦး ● နွေဦးဟာ ငါတို့အိပ်မက်တွေ အဖူးလိုက် ခူးသွားတယ်
ကမ်လူဝေး ● မတော်တဆ →